काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययनअघि बढाउन भारत इच्छुक -
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययनअघि बढाउन भारत इच्छुक
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:२५ । काठमाडाैं
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन भारत सरकारले चासो देखाएको छ । अध्ययनका लागि भारतीय टोली नेपाल आउन चाहेको भएपनि कोभिड-१९ कारण तत्काल अनुमति दिन नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ ।
रेल विभागले उनीहरुलाई नेपाल आउन अनुमतिका लागि गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहेकाले तत्काल उनीहरु आउन दिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । अझै एक दुई महिनासम्म टोलीलाई बोलाउन नसकिने हुनसक्छ । उनले भने, ‘कोभिड सङ्क्रमण कम भएपछि मात्रै अघि बढ्न सक्छ ।’
भारत सरकारकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेल निर्माणको समझदारी भएको थियो । सस्झौतानुसार जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनी दुई स्थानमा निर्माण अघि बढीसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनहवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज रहेका छन् ।
१. उपत्यकाको अनलाइन शिक्षा शुःल्कमा एकरुपता बनाउने प्रयास
२. सार्वजनिक यातायात : ‘न स्यानिटाइजर न दूरी, भाडा मात्र बढी’
३. शम्भुजीत, डब्बु र सरिताले ल्याए पहिलो भेटमै…
४. गरिबी निवारणका लागि चीनले पाँच वर्षमा १५ खर्ब युआन परिचालन
५. भियतनामको शक्तिशाली आँधीमा तीनको मृत्यु एक सयभन्दा बढी घाइते
६. अमेरिकामा चुनावी मुद्दा फेरिने सम्भावना, न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद